I-Europe Train Route Maps Guide | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > I-Europe Train Route Maps Guide
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 07/06/2020)
Sikholelwa ngokuqinile ukuthi ujantshi travel ingenye engcono kunazo zonke izindlela ezihlelekile zokuhamba. Ukuze kufezwe lokho, sixhumane cishe neshumi nambili abaqeqeshi bezitimela ezihlukile ukuletha amathikithi wesitimela amahle kakhulu futhi ashibhile kulo lonke elaseYurophu. Lokhu kusho ukuthi singakunikeza ngamakhulu ongakhetha kukho emephini yethu yesitimela.
Ukusuka ku-Eurostar enejubane eliphezulu kuya isitimela sokulala esihle imizila, sichitha sonke isikhathi sethu ekutholeni amanani angcono ngakho akudingeki ukuba. Ukuze kufezwe lokho, sidale i-athikili yomhlahlandlela wamamephu wesitimela akukhombisa eminye yemizila yethu ethandwa kakhulu yesitimela. Lokhu kufaka phakathi uhambo olusuka eLondon luya eParis, Florence eRoma, nayo yonke indawo emaphakathi.
Uma ungasiboni isiteshi sakho lapha – ungakhathazeki! ukubambisana ethu asivumela ukuba bakuthole amathikithi ku ezahlukene isitimela imigqa – imizila zendawo, ukuxhumana komhlaba, kanti ukuhamba phambili ngesivinini esikhulu konke kufakiwe.
Ngakho uzithola ukugqugquzeleka uhambo, futhi uma usulungele, phambili ekhasini lethu lokusesha ukuthola amathikithi wesitimela amahle kakhulu futhi ashibhile nxazonke!
Izincwajana zemininingwane Ezokuthutha Is The nokunobungane Way Izikhangibavakashi. Lesi sihloko kulotshiwe sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Hamba nge- Londoloza Isitimela, Amathikithi Eshibhile Eshibhile Iwebhusayithi Emhlabeni.
Izibonelo Zethu Zemephu Yendlela Yethu Ejwayelekile:
1. Izitimela Ezivela eLondon St Pancras International To Paris
Isitimela esivela eLondon siya eParis singesinye esisheshayo eYurophu. Isebenza yi-Eurostar, ungazithola usuka e-United Kingdom uye eFrance ngamahora amabili nje nemizuzu eyishumi nesithupha. Lokho kukunika isikhathi esithe xaxa sokulala ngaphakathi, thatha isitimela futhi ujabulele a uhambo losuku oluya enhlokodolobha yaseFrance. Thatha i-baguette bese uzulazula eLouvre – noma umane ujabulele bonke ubuhle iParis okufanele bunikeze.
Ukusuka eLondon St Pancras kwenzeka njalo, izitimela ezisebenza cishe njalo ihora. Kungashiwo okufanayo ngokubuya eParis kuya eLondon, futhi onboard uzothola zonke izinsiza eziphezulu ezilindelwe zendlela yesitimela ephezulu.
Uma ukuhlala eParis, ungahamba futhi uye ngakolunye uhlangothi, esizokuthola ufika eLondon ekuseni kakhulu uma ufisa. Ungalibhekisa eSoHo futhi uthathe owokubukwa kweBroadway noma umane ujabulele enye imali yokugibela. Noma kunjalo, isitimela sinikeza ukuguquguquka okukhulu ngezikhathi zokuhamba.
Amsterdam amathikithi eParis
ILondon kuya amathikithi eParis
Rotterdam kuya amathikithi eParis
Amabhulashi amathikithi eParis
2. Izitimela Ezisuka EFlorence Ziya eRoma Termini
Amadolobha amabili aphezulu e-Italy, UFlorence noRome bayikhaya lamakhulu izivakashi lwazo zonke izinhlobo zezivakashi. Ama-buffs wezobuciko angazulazula eVictoria ukuthola indawo lapho Sistine chapel. Ama-Foodies angathokozela enye ye-fresest buffalo mozzarella ezungeze. Noma yikuphi ukunambitheka kwakho, lezi ezimbili emadolobheni Italian kukhona izindawo ezinhle ukuhlala isonto noma emihlanu.
Kungcono kakhulu, izitimela ezixhumanisa uFlorence kanye neRoma ziningi futhi azibizi. Lolu hambo luthatha ihora nesigamu nje futhi uthola ibhonasi eyengeziwe yemaphandleni amahle ngaphandle kwamafasitela akho.
Milan eziya amathikithi aseRoma
UFlorence eziya eRoma amathikithi
Amatikiti wePisa aya eRoma
Amathikithi aseNaples aya eRoma
3. Imephu Yendlela: Izitimela Zisuka ERoma Kuya EMilan
Sesikhulumile ngeRoma, kodwa iMilan kungenye idolobha elihle e-Italy. Uhluke eningizimu ye-Italy njengoba u-apula enza amawolintshi, UMilan ungumdondoshiya wesimanje. Iyaziwa ngemfashini yayo ephezulu nemicimbi ephezulu, idolobha liyindawo yokumisa noma nini eholidini lase-Italy. Ngenkathi isimo sezulu singeyona neze iMedithera, usengajabulela izakhiwo ezinhle futhi nomnyuziyamu noma amabili nganoma yisiphi isikhathi sonyaka.
Uhambo olusuka eRoma luya eMilan lude kakhulu kunolo lukaFlorence. Akunasidingo sokwesaba, Nokho, kusese amahora amathathu nesigamu okulawuleka kuwo. Lokho kukunika nje isikhathi esengeziwe njengokungathi sijabulela indawo enhle!
Amathikithi eGenoa ukuya eMilan
I-Roma ukuya kumathikithi eMilan
I-Bologna kumathikithi eMilan
UFlorence kuya amathikithi eMilan
4. Izitimela Zisuka EHamburg Ziya Copenhagen
Kufanele ube yiliphi iholide laseYurophu, IHamburg neCopenhagen kungenzeka kungabi ngamadolobha okuqala engqondweni yakho ukuvakasha. Kuyihlazo lokho, Nokho, ngoba womabili lamadolobha agcwele umlando kanye nemisele emibalabala. IHamburg idolobha elikhulu lesikhumulo esisenyakatho neJalimane. Kungenzeka ukuthi wake wakuzwa ngaphambilini ngenxa yokuxhuma kwayo ne ukudla okuthandwa ngokujwayelekile ama-hamburger. fun Eqinisweni – abantu abahlala eHamburg babizwa nangokuthi amaHamburger.
Copenhagen, Ngokolunye uhlangothi, inhlokodolobha yaseDenmark. Ngenkathi ufuna ukuvakasha ku- ihlobo noma ubungozi besimo sezulu esibuhlungu, kunokuningi okufanele kwenziwe kuleli dolobha lolwandle. Kusuka ezakhiweni ezinemibala egqamile kuya emigoqweni ye-hip cellar, inhlokodolobha yaseDenmark inayo cishe yonke into.
Isitimela esiphakathi kwale mizi emibili sizothatha isikhashana. Uhambo luhlala ngaphezulu kwamahora ayisithupha, ngakho-ke qiniseka ukuthi uletha ukuzijabulisa. Lokho kushiwo, izitimela zanamuhla futhi zinokuhamba okuningi okutholakalayo ukuze ukwazi ukuhlala emuva uphumule ngokuthula.
Hamburg abeze eCopenhagen Izitimela
Hanover abeze eCopenhagen Izitimela
Berlin abeze eCopenhagen Izitimela
5. Imephu Yendlela: Izitimela Ezivela KuZurich Kuya KuBern
Uma wake wafuna ukuhamba i-Alps, ngeke uthole izisekelo ezingcono zokuhlola kuneZurich noBern. Zombili zitholakala ku izwe laseSwitzerland, lamadolobha aqhele ngehora nje nge isitimela. Yize kungenzeka ukuthi awukaboni, IBern inhloko-dolobha yaseSwitzerland, hhayi amanye amadolobha ayo aziwa kakhulu njengeGeneva noma iZurich. Idolobha leli linabantu abaningi abangaphezu kwesigidi futhi ligcwele ubuhle obuhle.
Khonamanjalo, IZurich yaziwa ngebhange layo – yize uzithola ungenwe yindawo engamachibi kuneziakhiwo zawo. Idolobha selakhiwe ngokuphelele unomphela 2,000 iminyaka futhi inabantu abacishe babe ngamakhulu amahlanu ezinkulungwane.
Ukuhamba ngesitimela kuvamisile futhi kusetshenziswa yizitimela zanamuhla, noma ngabe awunaso isikhathi esiningi sokuxoxa ngamabomu ngalokhu ngehambo olufushane kanjalo. Xhuma kwi-WiFi yamahhala, phequlula kancane, bese usuqedile – indlela ephelele yokuhamba!
Amathikithi eZurich To Bern
Amathikithi eGeneva To Bern
Amathikithi Ahlanganisiwe KuBern
IZurich iya eHamburg amathikithi
Ngobubanzi bozakwethu kulo lonke elaseYurophu, nakanjani uzothola indlela oyithandayo. Ukuthi ngabe ufuna izinketho zasendaweni noma uhlela uhambo lokuhamba impilo yonke, namathela Londoloza Isitimela ukuthola izinketho ezingcono kakhulu zamathikithi atholakalayo ngamanani amahle kakhulu.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “I-Europe Train Route Maps Guide” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit nge isixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-train-route-maps-guide%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo umzila isitimela sethu amakhasi okufikela.
Ngo isixhumanisi esilandelayo, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lokhu kuxhumana ukuze IsiZulu imizila amakhasi okufikela, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/nl_routes_sitemap.xml, futhi ungangena esikhundleni se-nl kuya ku-fr noma i-tr nezilimi eziningi ozikhethayo.
I-EuropeTraveling i-eurotrip longtrainjourneys TrainRoutes Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelinspiration tripinspiration
Carissa kuyinto isihambi okhuthele futhi umbhali owakhuliswa uziphilisa wakhe ngokuletha the best amathiphu travel abafundi bakhe. Akezwa ushayise 40 amazwe off wakhe bucketlist kuze kube manje futhi akazimisele kokuma. Kungakhathaliseki ephuza ikhofi e Napoli noma sigubha Harry Potter e Edinburgh, waba kuyamjabulisa njalo ukuhlangana nabantu ezintsha futhi ubone izinto ezintsha. - Ungakwazi uchofoze lapha ukuze ngithinte
UNESCO Sites EYurophu
Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
Lapho Ukuze Thola Europe Iningi Ezinhle Architecture
Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Izikhangibavakashi Europe